mairie-antananarivo – Communiqué CUA – Canada
Communiqué CUA – Canada
auteur 22 jona 2017 Commentaires fermés
Ao anatin’ny fivoriana tanteraka ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an’ireo Ben’ny tanàna an-tanàn-dehibe izay atao any Montréal any Canada. Anisan’ny manatrika izany ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Rtoa Lalao Ravalomanana sy ny delegasiona tarihany.
Nisy atrikasa izay natao ny alarobia 21 jona 2017 “Groupe de Plaidoyer, statut de l’élu local et de la fonction publique territorial”. Anisan’ny noresahan’ ireo delegasiona avy eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra nandritra ny dinika, fa tsy misy finiavana politika mihitsy ny fitondrana Malagasy ho amin’ny fiaraha-miasa amin’ny kaominina an-tanàn-dehibe.
Voaresaka ihany koa fa misy ny sakana eo amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fokotany sy ny Kaominina satria ny lehiben’ny Distrika no manendry ny sefo fokotany. Ny tokony ho izy anefa dia omena lanjany ny gouvernance locale na ny fitantanana ifotony.
Hatramin’izao anefa na miezaka miasa aza ny kaominina Antananarivo Renivohitra dia tsy mbola nahazo ny vola tokony ho azy na ny subvention avy amin’ny fitondram-panjakana. Ny teo aloha rehetra anefa dia nahazo izany.
Mitady sy mikatsaka mandrakariva ny tombontsoan’ny Kaominina ny delegasiona izay manatrika ny fivoariana ka dia nanangana ny antsoina hoe Legal Team ivondron’ny mpahay lalàna ny sy ny mpisolo vava, hiaro ny tombontsoan’ny Kaominina sy ny vinavinan’asany eo anivon’ny AIMF sy OIF sy ny maro hafa. Izy ireo no hiady sy hanindry ny fitondrana ho an’ny tombontsoan’ny kaominina, ao anatin’ny fenitry ny lalàna manan-kery, ireo dia hiarahana miasa amin’ny praiministra Kanadianina teo aloha, Andriamatoa Jean Charest, izay manana mpisolo vava miisa 600 eo miara-miasa aminy.
Marihina entoana fa ben’ny tanana avy aty amin’ny kaontinanta Afrikanina miisa 150 no manatrika ity fivoriana ity miampy ireo ben’ny tanana mivondrona ao amin’ny City40 avy any amin’ny kaontinanta Eropeanina.
AO ANATY » Mpiara-miombon'antoka, Serasera